Soo dejisan Microsoft Word 16.0.13029.20182 – Vessoft
AndroidXafiiskaSoftware softwareMicrosoft Word
Bogga rasmiga ah: Microsoft Word
Faallo ku saabsan Microsoft Word
Microsoft Word Xirfadaha la xiriira
4shared – aalad loo adeegsado marin u helida iyo maaraynta macluumaadka adeega 4shaqeynta. Softiweerku wuxuu kuu ogolaanayaa inaad marin u hesho koontadaada iyo inaad ku ciyaarto faylasha warbaahinta.
Qalab ayaa habboon in la badalo codka. Software wuxuu isticmaalaa saamaynta badan si loogu badalo fariimaha codka oo ay jirto awood ay ku dhigay file ka badbaadiyay sida ringtone ah.
Habka madadaalada ah ee lagu baran karo dadka aduunka oo idil. Software waxay taageertaa shaqooyinka shabakadaha bulshada waxayna ku jiraan fursadaha ballaaran ee nidaamka raadinta ee dadka isticmaala.